Tom Hardy – Myanmar Subtitles
CIA အေးဂျင့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ FDR Foster (Chris Pine) နဲ့ Tuck (Tom Hardy) တို့ဟာ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သလို လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲ ပါတနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရည် လျှို့ဝှက်နိုင်စွမ်း တိုက်ပွဲဝင် အရည်အသွေးတွေက သူတို့ကို စီအိုင်အေမှာ ထိပ်ဆုံးလွှာကို ရောက်စေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လော်ရန် (Reese Witherspoon) ဆိုတဲ့ ဆံပင်ရွှေရောင် မိန်းမလှလေးကို တွေ့ဆုံရချိန်မှာတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ အစမ်းသပ်ခံစရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ အဆုံးစွန်သော အရည်အသွေးတွေနဲ့ နည်ပညာမြင့်ကိရိယာတွေကို အသုံးချပြီး လော်ရန့် အချစ်အတွက် တိုက်ခိုက်ရမယ့် အခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါ..။ ဘယ်သူကများ လော်ရန့်အချစ်ကို ကံထူးသူဖြစ်လာမလဲ? သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက ကာလရှည်သံယောဇဉ် ခိုင်မြဲနိုင်ပါ့ဦးမလား? FDR Foster (Chris Pine)အဖြစ် ကို မမ၀မ်းဒါဝူးမန်းရဲ့ ချစ်သူအဖြစ် သိကြသလို Tuck (Tom Hardy) ကိုတော့ အခုလာမယ့် venom အဖြစ်သိကြမှာပါ။ မင်းသား ချောချောနှစ်ယောက်ရယ် ...
မင်းသားချော Tom Hardy က ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အထီးကျန်နေတဲ့ အရက်စပ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အကိုဝမ်းကွဲရဲ့ အရက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ် သူ့အကိုဝမ်းကွဲက သူ့အတွက်အမြဲတမ်းရန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့လဲ သူကတော့ အကိုအပေါ်သိတတ်ပြီး ကူညီတတ်လွန်းသူပါ ဒီအရက်ဆိုင်ကို တကယ်တမ်းပိုင်ထားသူတွေက ဒုစရိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းအလဲအလှယ်လုပ်တဲ့နေရာအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ် တရက်မှာတော့ သူတို့ရဲ့အရက်ဆိုင်ကို ဓားမြတိုက်ခံလိုက်ရပြီး ပိုင်ရှင်တွေ အလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ ပါသွားတဲ့အခါ သူတို့ညီအကို၂ယောက်ကို ပိုက်ဆံနဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရအောင်ယူလာဖို့ ပိုင်ရှင်တွေက စေလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ် IMDB: 7.1 Directors: Michaël R. Roskam Stars: Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini File size: 900mb,500mb Link type: soliddrive,openload Encoded by Zon Myat Noe Swe Subtitled by www.khitmarket.com
Imdb: 6.5 Director: Daniel Espinosa Stars: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace Leo Demidov [Tom Hardy] က ၁၉၅၀ ဆိုဗီယက်ရုရှားတွေရဲ့လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တစ်ယောက်။ သူ့မိန်းမ Raisa (Noomi Rapace) ကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောခိုင်းလို့ငြင်းဆန်တဲ့အခါအရာအားလုံးဆုံးရှူံးသွားပါတယ် ကြောက်ရွံစရာကောင်းတဲ့ရှေ့တန်းစခန်းကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံခဲ့ရတယ်။ Leo and Raisa ကဗိုလ်ချုပ် Mikhail Nesterov (Gary Oldman)နဲ့ပေါင်းခဲ့ပြီး ကလေးငယ်တွေကိုသတ်တဲ့ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကိုဖမ်းဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ Leo ရဲ့ပြိုင်ဘက်စိတ်ဝေဒနာရှင်လူသတ်သမား Vasili (Joel Kinnaman) ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့ Leo ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဒေါင်းကြည့်လိုက်ကြပါ။ File size – 1.5 gb / 750 mb Link type – openload / soliddrive